डसनामुनि लुकाएर राखेको करोडौ रकम बरामद ! |
डसनामुनि लुकाएर राखेको करोडौ रकम बरामद !
२०७६, १९ पुष शनिबार २२:२७ January 4, 2020 ताजा खबरबिदेश
एजेन्सी : कालो धनले सबै देशमा समस्या दिइरहेको छ । मानिसहरु आफ्नो कालो धन लुकाउनको लागी नयाँ नयाँ तरिका खोजिरहेको हु्न्छ । हाल एक व्यक्तिको घरको ओछ्यान मुनिबाट करोडौ रुपियाँ भेटिएको छ ।उनले नोटको बन्डल ओछ्यानको मुनि राखेका थिए । यति धेरै पैसा सामान्य तरिकाले घरमा राखेको आश्र्चय लाग्दो थियो ।घटना ब्राजिलको हो । प्रहरीले अनुसन्धान क्रममा उक्त रकम भेटेको थियो । प्रहरीले छापा मारेपछि फोटो जारी गरेको थियो । ब्राजीलको २८ वर्षिया क्लेबर रेने रिजेरियो पैसा लुकाएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
यी व्यक्तिको डसनामुनिबाट करोडौ डलरको राशी प्रहरीले बरामद गरेको थियो । त्यस्तै करोडको कारोबार, आलीशान बंगाला र पति पत्नी दुवैको हातमा डिग्री पासको सर्टिफिकेट हुँदा पनि एउटा परिवार अन्धकारमा बसेका छन् । उनीहरुको घरमा वत्ती, टिभी, फ्रिज छैन र उनको बच्चाहरु आजसम्म स्कुल गएका छैनन् । इन्दौर को स्रेहलतागंजमा बस्ने बडजात्या परिवारको यस्तो हाल भएको हो ।फाँली ए फैमिली र शेयर्ड सायकोसिस नामको मनोवैज्ञानिक रोगबाट पिडित भएका बडजात्याको परिवार दश वर्ष यता बाहिर निस्केका छैनन् । उनीहरु सामान्य जीन्दगी जीउन कोशिश गरिरहेका छन् ।
आमाको कारण सम्भव हुन गइरहेको छ ।समयमा ध्यान नदिएको कारणले सबै परिवार यो रोगको चपेटामा परिरहेका हुन् । यीनीहरुको तीन बच्चा छन् । उनीहरुको बच्चाहरु ९ वर्ष , ७ वषर््ा र एक वर्षका दुई छोराहरु छन् । १० वर्ष देखि छोरा, बुहारी, छोरी र नाती नातिना पनि यो रोगको संक्रमणमा परेका छन् । यी पिडित परिवार मनोचिकित्सकको सहयोगले ठिक हुने कोशिश गरिरहेका छन् ।यीनीहरुको मार्बल्सको कारोबार राम्रै चलेको थियो । छोराको विवाहपछि सबैकुरा सामान्य नै चलिरहेको थियो । १० साल पहिला छोराको स्वभावमा परिवर्तन देखिन थाल्यो ।
रिस, शंका, चिडचिडापन र काममा ध्यान नदिने , सहने शक्तिमा कमी जस्ता समस्या देखिन थाले । विस्तारै विस्तारै सबैसंग सम्र्पक टुटु्दै गयो । उनकी आमा वीणाले बताएकी छिन् ।आफ्नो छोरा अंकुरको स्वभावमा आएको परिवर्तनको कारण घरमा सबैक्ुरा लथालिगं हुँदै गएको जनाइएको छ । यो परिवारले भुत प्रेतको साया परेको भन्दै लाखौ रुपियाँ खर्च भएपनि कुनै फाइदा नभएको बताइएको छ ।
२०७६, १२ फाल्गुन सोमबार १४:२०
भारत आएका ट्रम्पलाई देख्ने बित्तिकै मोदीले झ्याप्पै अंगालो हाले
२०७६, १० फाल्गुन शनिबार १८:०७
जापानमा हुने युवतीको ब्यथाः ‘न छोड्न सक्छु, न अर्को बिहे गर्न सक्छु’
२०७६, ९ फाल्गुन शुक्रबार १८:०७